Allgedo.com » Abdulfattah “John” Jandali oo ah aabaha Steve Jobs ayaa intii muddo ahba murugo ku noolaa, sababtu waa maxay?
Abdulfattah “John” Jandali oo ah aabaha Steve Jobs ayaa intii muddo ahba murugo ku noolaa, sababtu waa maxay?
Print here| By: allgedo.com: Friday, October 7, 2011 // 2 Jawaabood
Aas-aasihii iyo Guddoomiyihii Kambaniga caanka ah ee APPLE iyo ninkii iska lahaa hal abuurkii lagu sameeyay iPhone, iPad, iPod, iMac iyo iTunes oo la yiraahdo Steve Jobs ayaa maalintii shalay aheyd asaga oo 56 sano jir ah si nabad gelyo ah u dhintay.
Steve Jobs ayaa sida la sheegay waxuu u dhintay Kansarka la yiraahdo “pancreatic cancer” oo gala qanjirka caloosha ku jira ee la yiraahdo “pancreas.”
Waalidiinta Steve Jobs ee kala ah Abdulfattah “John” Jandali oo ah nin muslim Siiriyaan ah oo yaraantiisii dalka Mareykanka ku galay Qaxootinimo iyo gabar cadaan ah oo magaceeda la yiraahdo Joanne Carole Schieble ayaa waxay iyaga oo 23 jiro ah isku barteen Jaamacad ay dhiganayeen oo la yiraahdo University of Wisconsin oo ku taala magaalada Madison ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka.
Ayada oo uusan jirin wax meher ama guur ah oo dhex maray Abdulfattah iyo Joanne ayaa sanadkii 1954 waxaa gabadha kusoo baxay uur, nasiib darase, xiligaas ma sahlaneyn sidii qoys cadaan ah ay u aqbali lahaayeen in ay gabadhooda siiyaan nin aanan cadaan aheyn.
Cadaadis weyn oo dhanka reerkeeda uga yimid iyo ayada oo ka baqday haddii lagu ogaado in ay uur u leedahay nin Carab Muslim ah awgeed, ayaa Joanne oo aanan cidna u sheegin waxay si dhuumasho ah ku aaday magaalada San Francisco si ay ugu soo dhasho, halkaasoo ay February 24, 1955 ku dhashay wiil cidda korsatay ay u bixiyeen Steven Paul.
Si kasta oo la’isugu diidaba, aakhirkii Abdulfattah Jandali iyo Joanne Schieble waxaa u suurtagashay in ay muddo kaddib is guursadaan, halkaasoo ay haddana isu dhaleen gabar magacii loo bixiyay uu aha Mona Jandali, balse markii danbe loo bixiyay Mona E. Simpson.
Mona Simpson oo dhalatay June 14, 1957 ayaa ah gabadha kaliya ee ay isku aabo iyo isku hooyo yihiin Steve Jobs.
Steve Jobs iyo Mona E. Simpson markii ugu horeeyay ee ay is arkaan waxay aheyd ayaga oo dad waaweyn ah, wixii intaa ka danbeeyayna is barashadoodu waxay u ekeyd sidii laba qof oo aan walaalo aheyn, balse saaxiibo xiriir fiican leh sida uu hadda ka hor Steve Jobs qudhiisa sheegay.
Mona Simpson waa gabar wax baratay, waxayna qortay buugaag dhowr ah oo u badan sheekooyin aan run aheyn (VICTION BOOKS), kuwaasoo mid ka mid ah loo rogay Film, waxayna hadda luuqadda Ingiriiska ka dhigtaa University of California oo ku taala Los Angeles.
Todobaadyo ka hor inta uusan dhiman Steve Jobs ayaa wareysi uu siiyay aabihiis Abdulfattah Jandali qaar ka mid ah Idaacadaha reer galbeedka waxuu ku yiri “aad iyo aad baan uga xumahay in aanay aniga iyo wiilkeyga marnaba noo suurta galin in aan isu imaano ama aan wada xariirno.”
Mar uu ka hadlay sababta ku kaliftay in wiilkiisa uu dayaco oo ay qoys kale korsadaan, isla markaana ay iyaga magac ula baxaan ayaa asaga oo aad uga xun dhacdadaas waxuu yiri “eeda aniga ma lihi ee waxay talada wiilkeyga lagu siiyay qoys kale ka timid hooyadiis oo markaas ka baqeysay in uu dhib uga yimaado qoyskeeda haddii ay sheegto in aabaha dhalay canugga aan aniga ahay, ayaa intay carartay oo Isbitaal ku dhashay wiilkeyga, dabadeedna si ay u korsadaan qoys kale ku wareejisay.”
Mar kale, Abdulfattah oo hadda 80 jir ah ayaa markii lagu sheegay wiilkiisa Steve Jobs in uu qabo “pancreatic cancer” ayaa waxuu ku cataabay “bal wax kale iska dhaafe, waxaan aad ugu farxi lahaa inta uu nool yahay in uu wiilkeyga mar un ila kulmo oo xataa aan meel ku wada qaxweyno.”
Sababtu si kastaba ha ahaatee, Abdulfattah oo ay u muuqatay in 50 sano ka hor markii wiilkiisa qoys kale lagu wareejiyay uusan waxba ka qaban karin, ayaa murugada muddada dheer haysatay waxaa uga sii daran asaga oo aanay marnaba u suurta galin intii uu noolaa wiilkiisa Steve Jobs in ay is arkaan ama kulan iyo wada hadal toona yeeshaan.
Abdulfattah qudhiisa oo ah nin wax bartay ayaa waxuu hadda ka hor mar ahaa macalin wax ka dhigi jiray Jaamacad ku taala dalka Mareykanka culuunta siyaasadda (political science), laakiin mar danbe ayaa waxuu u wareegay in uu ka mid noqdo howl wadeenada goob qamaarka lagu ciyaaro oo la yiraahdo Reno Casino oo ku taala magaalada Reno ee gobolka Nevada, halkaas oo uu hadda ka yahay madaxweyne ku xigeen (vice president.)
2 Jawaabood " Abdulfattah “John” Jandali oo ah aabaha Steve Jobs ayaa intii muddo ahba murugo ku noolaa, sababtu waa maxay? "
MOHAMED FARAH SULLEY says:
Wowowo waxa nasib daro ah in ad wiil ad dhashay ad arki waliga marka waxa dhahilaha hadi u muslim yahay ilahay haka siyo samir iyo iman
wiil soomali says:
waxaa maanta aduunku waayay nin aragti dheer lahaa oo loo baahnaa
waxaan filayaa in aduunku qarniyo xasuusan doono mr stev waxaa uu ahaa nin ku dhiiraday in maskaxda aadamigu heer gaarto noqdayna ninkii ku abtirsaday bahda tiknoolajiyada aduunku maanta ku taamayo waxaan hadalkeeyaga ku soo xirayaa ilaaheey haka raali noqdo mr stev